congressional - Synonyms of congressional | Antonyms of congressional | Definition of congressional | Example of congressional | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for congressional
Top 30 analogous words or synonyms for congressional
မာတင်လူသာကင်း ဂျူနီယာ ကင်းသည် ၁၉၆၈ ခုနှစ် ဧပြီ ၄ ရက်နေ့တွင် တန်နက်စီပြည်နယ်၊ မင်းဖစ်မြို့တွင် လုပ်ကြံခံခဲ့ရသည်။ သူသေဆုံးပြီးနောက်လည်း သူ့အားဂုဏ်ပြုကာ ဆုတံဆိပ်များစွာ ချီးမြှင့်ခဲ့ကြသည်။ ၁၉၇၇ တွင် Presidential Medal of Freedom ဆုကိုလည်းကောင်း၊ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် Congressional Gold Medal ဆုတံဆိပ်ကိုလည်းကောင်း ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ခဲ့ကြသည်။ ၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် မာတင်လူသာကင်းနေ့ ဟူ၍ အမေရိကန်တစ်နိုင်ငံလုံး အားလပ်ရက်အဖြစ် ဂုဏ်ပြုသတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။
နေးလ် အမ်းစထရောင်း နေးလ် အမ်းစထရောင်း () (ဩဂုတ် ၅၊ ၁၉၃ဝ- ဩဂုတ် ၂၅၊ ၂ဝ၁၂) သည် အမေရိကန်လူမျိုး အာကာသယာဉ်မှူးဖြစ်ပြီး လကမ္ဘာသို့ ပထမဆုံးခြေချသူလည်း ဖြစ်သည်။ သူသည် အာကာသ အင်ဂျင်နီယာ၊ လေယာဉ်အစမ်းမောင်း၊ ရေတပ် လေယာဉ်မှူးနှင့် တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခတစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။ အာကာသယာဉ်မှုးအဖြစ်ခင် သူသည် ရေတပ်တွင် အရာရှိအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ကိုရီးယားစစ်ပွဲ၍ ဆင်နွဲခဲ့သည်။ တောင်ပိုင်း ကယ်လီဖိုးနီးယား တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲရသည်။ အမ်းစထရောင်းသည် အပိုလို ၁၁ မက်ရှင်တွင် နောက်ဆုံးအကြိမ်အဖြစ် အာကာသယဉ် ကွပ်ကပ်ရေးယာဉ်မှုးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ယင်းသည် ၁၉၆၉ ခုနှစ် လကမ္ဘာပေါ် ခြေချခြင်းဖြစ်သည်။ အမ်းစထရောင်းသည် ၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင် သမ္မတ Richrd Nixon မှ Presidential Medal of Freedom ကိုလည်းကောင်း၊ သမ္မတ Jimmy Carter မှ Congressional Space Medal of Honor ကိုလည်းကောင်း၊ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်တွင် သူ့အဖွဲ့သားဟောင်းနှင့်ပူးတွဲကာ Congressional Gold Medal အားလည်းကောင်း ဆွတ်ခူးခဲ့သည်။ အမ်းစထရောင်းသည် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ခွဲစိတ်ကုသရင်း အသက် ၈၂ နှစ်တွင် ကွန်လွန်ခဲ့သည်။
ဘီ-၂ ကိုယ်ပျောက်ဗုံးကြဲလေယာဉ် A procurement of 132 aircraft was planned in the mid-1980s, but was later reduced to 75. By the early 1990s, the Soviet Union dissolved, effectively eliminating the Spirit's primary Cold War mission. Under budgetary pressures and Congressional opposition, in his 1992 State of the Union Address, President George H.W. Bush announced B-2 production would be limited to 20 aircraft. In 1996, however, the Clinton administration, though originally committed to ending production of the bombers at 20 aircraft, authorized the conversion ofa21st bomber,aprototype test model, to Block 30 fully operational status atacost of nearly $500 million.
ဘီ-၂ ကိုယ်ပျောက်ဗုံးကြဲလေယာဉ် In May 1995, based on its 1995 Heavy Bomber Force Study, the DOD determined that additional B-2 procurements would exacerbate efforts to develop and implement long term recapitalization plans for the U.S. Air Force bomber force. In October 1995, former Chief of Staff of the United States Air Force, General Mike Ryan, and former Chairman of the Joint Chiefs of Staff, General John Shalikashvili, strongly recommended against Congressional action to fund the purchase of any additional B-2s, arguing that to do so would require unacceptable cuts in existing conventional and nuclear-capable aircraft, and that the military had greater priorities in spendingalimited budget.
ကျူးဘားဒုံးပျံအရေးအခင်း At 3:00 pm EDT on October 22, President Kennedy formally established the Executive Committee (EXCOMM) with National Security Action Memorandum (NSAM) 196. At 5:00 pm, he met with Congressional leaders who contentiously opposedablockade and demandedastronger response. In Moscow, Ambassador Kohler briefed Chairman Khrushchev on the pending blockade and Kennedy's speech to the nation. Ambassadors around the world gave advance notice to non-Eastern Bloc leaders. Before the speech, US delegations met with Canadian Prime Minister John Diefenbaker, British Prime Minister Harold Macmillan, West German Chancellor Konrad Adenauer, and French President Charles de Gaulle to brief them on the US intelligence and their proposed response. All were supportive of the US position.